.သစ်စာမဲ့တဲ့ဇနီးအတှကျ ပိုငျဆိုငျမှုအားလုံးကို ပညာသားပါပါ တဈဝကျခငျြးစီခှဲပေးခဲ့တဲ့ အမြိုးသား(ရုပျသံ). – Thukhuma
.သစ်စာမဲ့တဲ့ဇနီးအတှကျ ပိုငျဆိုငျမှုအားလုံးကို ပညာသားပါပါ တဈဝကျခငျြးစီခှဲပေးခဲ့တဲ့ အမြိုးသား(ရုပျသံ).
လူတှဟော သူတို့ရဲ့အိမျထောငျဖကျက သူတို့အပျေါလိမျလညျလှညျ့စားနခေဲ့တာကို သိသှားရတဲ့အခါတိုငျး ပုံမှနျအားဖွငျ့ မိုးပွိုတော့မလို ခံစားကွရပါတယျ။အဆိုပါကိစ်စကွောငျ့ အမြိုးသမီးတဈဦးက သူတို့ရဲ့ကား သို့မဟုတျ သူတို့ရဲ့အခွားပုဂ်ဂိုလျရေးပစ်စညျးတှကေို ဖကျြဆီးခဲ့တဲ့အဖွဈလညျး ကြှနျတျောကွားဖူးခဲ့ပါတယျ။
သို့ပမေဲ့ သူမထကျအခွအေနဆေိုးတဲ့အဖွဈအပကျြတဈခုလညျးရှိနပေါတယျ။မကွာသေးခငျက ဂြာမနီနိုငျငံရှိ အမြိုးသားတဈဦးဟာ ဇနီးသညျက သူ့အပျေါလိမျလညျနတောကို သိလိုကျရတော့ ခကျြခငျြး ကှာရှငျးလိုကျပွီးနောကျ သူတို့ရဲ့ပိုငျဆိုငျမှုတှကေို ၅၀/၅၀ စီခှဲယူဖို့ သဘောတူခဲ့ကွပါတယျ။သို့ပမေဲ့ အဆိုပါအမြိုးသားဟာ သူ့အားလိမျလညျပွီး မထီမဲ့မွငျလုပျတဲ့ဇနီးကို လှယျလှယျလေး အလှတျမပေးခဲ့ပါဘူး ။ သူဟာ သူတို့ပိုငျဆိုငျတဲ့ပစ်စညျးအခြို့တှကေို ရောငျးပဈခဲ့သလို ပိုဆိုးတာက ပစ်စညျးအခြို့ကို တဈဝကျစီယူမယျဆိုတဲ့အတိုငျး ပစ်စညျးတဈခငျြးစီကို စကျနဲ့ တဈဝကျတိတိ ဖကျြပဈခဲ့တာပါဘဲ။ဒီတော့ အတျောလေးဒေါသထှကျနတေဲ့အဆိုပါအမြိုးသားရဲ့ပစ်စညျးဖကျြခွငျးအနုပညာကို ဆကျလကျကွညျ့ရှုခဲ့ကွပါအုံး။သူက ဗီဒီယိုနဲ့ပါ မှတျတမျးတငျထားခဲ့ပါသေးတယျ။
လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်က သူတို့အပေါ်လိမ်လည်လှည့်စားနေခဲ့တာကို သိသွားရတဲ့အခါတိုင်း ပုံမှန်အားဖြင့် မိုးပြိုတော့မလို ခံစားကြရပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက သူတို့ရဲ့ကား သို့မဟုတ် သူတို့ရဲ့အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးပစ္စည်းတွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်လည်း ကျွန်တော်ကြားဖူးခဲ့ပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ သူမထက်အခြေအနေဆိုးတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလည်းရှိနေပါတယ်။မကြာသေးခင်က ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ဇနီးသည်က သူ့အပေါ်လိမ်လည်နေတာကို သိလိုက်ရတော့ ချက်ချင်း ကွာရှင်းလိုက်ပြီးနောက် သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ၅၀/၅၀ စီခွဲယူဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့ အဆိုပါအမျိုးသားဟာ သူ့အားလိမ်လည်ပြီး မထီမဲ့မြင်လုပ်တဲ့ဇနီးကို လွယ်လွယ်လေး အလွတ်မပေးခဲ့ပါဘူး ။ သူဟာ သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအချို့တွေကို ရောင်းပစ်ခဲ့သလို ပိုဆိုးတာက ပစ္စည်းအချို့ကို တစ်ဝက်စီယူမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ပစ္စည်းတစ်ချင်းစီကို စက်နဲ့ တစ်ဝက်တိတိ ဖျက်ပစ်ခဲ့တာပါဘဲ။ဒီတော့ အတော်လေးဒေါသထွက်နေတဲ့အဆိုပါအမျိုးသားရဲ့ပစ္စည်းဖျက်ခြင်းအနုပညာကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါအုံး။သူက ဗီဒီယိုနဲ့ပါ မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။
၂၁ ရာစု ဖဘေု့တျ ခတျေ ကွီးမှာ အဈကို ဖွဈသူ မိနျးမ ခိုးမှာကို ညီမ ဖွဈသူ သိသှား သောအခါ.